मिशेल ओबामाको ट्रम्पलाई चेतावनी : अमेरिका न मेरो हो न तिम्रो, हामी सबैको हो
काठमाडौँ - अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाकी पत्नी मिसेल ओबामाले हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कडा आलोचना गरेकी छिन् ।
ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीका ४ नेताहरूमाथि आक्रोश पोख्दै नश्लवादी भएको आरोप लगाएपछि ओबामा उनीहरूको प्रतिरक्षामा उत्रिएकी थिइन् । ट्रम्पले ती चार नेतामाथि नश्लवादी भएको आरोप लगाउँदै यदि अमेरिकामा खुसी नभए अमेरिका छोड्ने उपाय सुझाएका थिए ।
'अमेरिका हामी सबैको हो,' ओबामाले भनिन्, 'हाम्रो देशलाई यहाँको विविधताले सबभन्दा बढी महान् बनाएको छ । चाहे हामी यहीं जन्मिएका हौँ, चाहे यहाँ शरण लिएर बसेका हौँ, एउटा कुरा सधैं याद के राख्नुपर्छ भने अमेरिका मेरो या तपाईंको होइन, यो हामी सबैको हो ।'
यसअघि पनि बाराक ओबामा पत्नी मिशेल ओबामाले ट्रम्पलाई कडा शब्दमा निन्दा गरेकी थिइन् । चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले महिलाको अपमान गरेको आरोप लगाउँदै ओबामाले भनेकी थिइन्, 'सभ्य मानिसहरू महिलाको अपमान गर्दैनन् ।'
ओबामाले अमेरिकीहरूसँग ट्रम्प जस्ता पुरुषहरूको यस्तो व्यवहार सहन गर्न नहुने अपिल गरेकी थिइन् । एरिजोनाको फिनिक्समा डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति पदकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओबामाले ट्रम्पसँग कुनै भिजन नै नभएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
चीनमा ब्रुसेलोसिस नामक रोग फैलिँदै
सच्चा समाजसेवीले निःस्वार्थ सेवा गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
दिउँसो सुत्ने बानी छ ? सताउलान् यस्ता रोगले !
पहिरोमा पुरिएर दुई जनाको मृत्यु
डाइबेटिज रोगका लागि भगवानको वरदान हो यो फल !
बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन मुख्य एजेण्डा